Yezihlangu Kwaye Isikhumba yabasebenzi ke, zaba ngabalungisi Job Inkcazelo / Iinxaxheba noxanduva Sample - JobDescriptionSample.org
ekhaya / Akohlulwanga / Yezihlangu Kwaye Isikhumba yabasebenzi ke, zaba ngabalungisi Job Inkcazelo / Iinxaxheba noxanduva Sample
Jacob Isilimela 28, 2016 Akohlulwanga Shiya amazwana 867 Views
Production, Planning, And Expediting Clerks Job Description / Imbopheleleko Template nemisebenzi
Buthanani, kubayeni, okanye abuyisele isikhumba ngesikhumba-like izinto, ezifana umzekelo impahla, kohambo.
Sika izimbo phandle elungileyo olandelayo, izinto okanye uchaza, nokusebenzisa isikere, zokuthena, imikhwa, okanye nokufuna machine.
ukuphuhlisa, embellish, okanye abuyisele iimveliso yesikhumba ngokwe-ngokweempawu, usebenzisa iinaliti nezitishi kunye bond, izixhobo lacing, anamathele izixhobo ngesandla, okanye rivet.
Wacwangcise la magama ze ngcina okanye athungwe izibonelelo ezifana imithi, okanye izinto, uboya, buckskin, ukuba bathathe inxaxheba kwimimandla.
umbala, imithombo eyahlukeneyo ukuba iziphumo ezinqwenelwa okanye kuwanelisa, ukuphuhlisa, Umbala, press, ukuthunga, uphawu okanye ubaze yesikhumba, iimilo, okanye zokwakha.
Khetha izinto neepatheni, kunye neendlela umkhondo kwi iimveliso ukuba icebiso.
Yesinxibo kunye nezihlangu zikholisa ngokupheleleyo njengokuba lokucheba kungqameko umvavanyi ezintsha kunye izithende ukuya imeko nezihlangu.
Esondele iindleko zeenkonzo okanye iimveliso babuza kuquka iiteki wena okanye izihlangu ukulungiswa, kwaye ufumane iindleko evela kubaxhasi.
Yongeza insoles ivuleke liqhubeka, wabeka izihlangu ukuphumeza iimpompo kunye outsoles, kunye uppers.
Cement, zeminwe, okanye athungwe izithende kunye ezinzulwini izicathulo.
izithende Form yezihlangu ngemela, kunye nodaka ezi ngaphezu ivili buffing Xa kugudiswa.
Buyisela okanye utshintsho iimpompo ezinyaweni, kunye nezinye iinxalenye izihlangu iiteki, nokusebenzisa izinto, nezitishi, buffing kunye nezinye izixhobo nokulungisa lendlela yokuqalelisa ikhompyutha, elabiwe.
Dala, ulungise, yaye alungise izihlangu zakutshiswa okanye okubuyisela ngokuhambelana oogqirha’ izisombululo, okanye ukuguqula iiteki babekho abantu specialneeds neenyawo nezomntu.
Afakele nokulungisa izinto mitts umzekelo yebhola, kunye neziqu, iingxowa, izicathulo, Izihlalo, wazithengisa, zemali.
izihlangu Indawo on iyaqhubeka ukususa thende umhloli, sisebenzisa ga okanye imikhwa.
Asihlambulule nokuphuhlisa nezihlangu.
Qinisekisa texture lesikhumba xa, umthunzi, nokuqina kwayo ukuqinisekisa ukuba elaneleyo ukuba umsebenzi abahlukene.
Hlola izisombululo okanye iinkcukacha, kwaye ukuba wadala bathathe imilinganiselo ukuba ukujonga uhlobo lwemveliso, zokuqasha calipers, izenzo tape, okanye imigaqo.
Hlola amanqaku iziphoso, kwaye susa iindawo ezisetyenziselwa okanye yonakele, kusetyenziswa isandla-izixhobo.
Lomhla nezolo okanye Ndibaxabele ezipokothweni kunye eliku okanye ukudibanisa izinto zentsimbi, ilawula .
Qhoboshela Imizobo okanye amacandelo ukuba azihombise okanye izinto unogada.
imeko, isilayi, ufake, kunye paddings ekhuselekileyo, padding, okanye ukwakheka, isicelo induku ujoyina.
ukucaciswa Consumer, uze uchaze okanye iipateni ukubekwa kwiindawo zomsebenzi, jeli udaka, okanye iipateni, ngokusebenzisa imilinganiselo, ukuba bazigcine.
Ukuvavanya abathengi ukuba isuti, uze uxoxe nala uhlobo izihlangu ukuze ube nokuzinza, ulwazi Andizami kubandakanya umgangatho ngesikhumba.
Aqinisekise izihlangu, kuquka ne ngokusonga Ukuncipha iziqwenga iindawo, kusetyenziswa i ibambelele adjustable.
cleats isithende-and-toe egobile phezu izihlangu.
Yenza izikhundla, zokubhala isithende, kwaye asitsala sisuke ifuzisela labathengi’ ezinyaweni.
amalungu Resew, kwaye endaweni noburhabaxa kunye needilesi nguTixo okanye imithwalo.
Career Iintshukumo Imiqathango
Ukufunda imihlathi Ulwazi-Ulwazi kunye nemihlathi ebhalwe ezinxulumene nomsebenzi amaphepha.
Active-Ukuphulaphula-Ukunikezela ingqalelo yonke into bathi abanye abantu, ukufumana ixesha kunye namandla ukuqonda iinkcukacha eyenziwayo, imiba ezibuza ngendlela efanelekileyo, kunokuba mesmerizing ngamaxesha ayilunganga.
Ukubhala-On zephepha elifanelekileyo neemfuno yabaphulaphuli ethetha ngempumelelo.
Math-Ukusetyenziswa izibalo ukulungisa iingxaki.
iindlela Technology-Ukusetyenziswa kunye nemigaqo zonyango ukusombulula iingxaki.
Criticalthinking-Ukusetyenziswa sizathu nokuqiqa ukuqonda amandla kunye neziphene yeziphumo, amakhambi okanye iindlela kwimiba.
ramifications Learning-Knowledge ulwazi olutsha Active zexesha elizayo nganye kwaye latest ingxaki ingxaki kunye nokwenziwa kwezigqibo.
Ukufunda Strategies-ngokuqasha icholwa iindlela educationORinstructional kunye nobuchule ezazibonisa ekuqeqesheni ingxaki okanye xa sele uyincutshe ekudlaleni imiba fresh.
Tracking-CheckingORDetermining usebenziso labantu abongezelelweyo, nakuye, okanye iinkampani cinga amanyathelo olungiso okanye ukwenza intuthuko.
Social Perceptiveness-Ukuba akukho unaware of othersI reactions kutheni mabaziphathe kuba benza kunye nolwazi.
Uququzelelo-Ukutshintsha amanyathelo malunga kwabanye’ izenzo.
Azithenge-biha abanye ukutshintsha ukuziphatha okanye iingcinga zabo.
Iingxoxo-Ukubonelela abanye ngokudibeneyo kwaye uzame axolelanise ombane.
Iinkonzo zoLwazi-Bamfuna ufuna izicwangciso ukuxhasa abantu.
Advanced Ingxaki-Ukusombulula-Ukuchonga iingxaki enzima kunye nokuphengulula ulwazi ezalana ukuhlola nokuvelisa iinketho kunye nokusebenzisa iimpendulo.
Imisebenzi Uphando-Ukufundisisa iimfuno kunye nokubalulwa imveliso ukwenza uyilo.
Engineering Design-Technologies ukunceda umntu lokuguqula iimveliso okanye iimfuno zokuxhobisa.
Izixhobo Selection-isigqibo uhlobo kwezixhobo kunye nezixhobo ezifunekayo kakhulu ukwenza umsebenzi.
izixhobo zokufaka-Kufakwa, iimveliso, zikagesi, okanye iipakethe ukuhlangabezana iinkcukacha.
izicelo computer Programming-Ukuvelisa ngokuphathelele ukusetyenziswa ukuba baninzi.
Imisebenzi Tracking-lomkhosi neminye imiqondiso, khwlzleyo, okanye uvavanyo ukuze uqiniseke sombane lisebenza ngempumelelo.
Ukuqhuba Phatha-Ukuthintela imisebenzi okanye iimveliso.
Izixhobo Ulondolozo-Ukwenza ukunakekela gear isigqibo nini na, oluhlobo luni na yokunakekela iyafuneka.
Zokusombulula-Icacisa ezibangela iingxaki ukuba zisebenza kwaye ukhetha oko ulwalathiso ngayo nayiphi na kuyo.
izixhobo okanye iimatshini ngokusebenzisa izixhobo eziyimfuneko ukulungisa-ukulungiswa.
Quality-Control Uphando-Ukwenza iimviwo neemvavanyo iimveliso, iinkonzo, okanye iinkqubo ukuba ukuvavanya ukusebenza okanye umgangatho.
Isigwebo and Decision Making-Ukuqwalasela iinzuzo kunye neendleko ehlobene yokuziphatha ukuba abafuna ukufumana lowo na izityalo ezinokulungela.
Uhlalutyo-Icacisa kufuneka basebenze luhlobo luni na inkqubo kunye nendlela kwebala iinkqubo, iimeko, kwaye setting nefuthe iinzuzo.
Methods Evaluation-Ukuchonga amanyathelo okanye izalathi si zokunikwa yokusebenza kunye ngokungqinelana neethagethi kumatshini efanelekileyo okanye indlela yokuziphatha kufuneka kakhulu yokunyusa umgangatho.
Time Management-Ukulawula abanye’ xesha kwaye oneis ixesha zabucala.
Administration of Financial Resources-isigqibo imali iza Akuthandabuzeki ukuba kusetyenziswa njani ukuba kwenziwe umsebenzi, kunye neentengiso mayelana nala inkcitho.
Management of Material asethi-Ukufumana nokubona ukuba ukusetyenziswa kakuhle iinkonzo, izixhobo, kunye neemveliso ezifunekayo ukwenza umsebenzi okhethekileyo.
Administration of Personnel Resources-Ukuvusa, ekudaleni, kunye noyena abantu xa asebenza, yokwahlula abantu best for the lomsebenzi.
Level High School (okanye kuGedaliya okanye iSatifikethi ukulingana High School Senior)
Abanye Training College
Ngokuphawulekayo ngaphantsi kwe High Level School
Impumelelo / Ukuzama – 81.57%
nenamandla – 77.67%
umzamo – 81.07%
Cooperation – 87.66%
Matter ngokuphathelene Abanye – 85.96%
Ukuzibamba – 78.55%
ukuthembeka – 90.41%
Ukuqaphela Iinkcukacha – 85.99%
amandla – 84.88%
umtyali-mali – 78.19%
Thinking kohlaziyo – 76.01%